Izixhobo zokugaya izihluzi zokuhambisa Kwizixhobo zokusila zomgubo, izixhobo zokujija zihlala zisetyenziselwa ukuhambisa izinto. Bathumela oomatshini abathembele kumjikelezo ojikelezayo ukuze batyhale izinto ezininzi zentshukumo ethe tyaba okanye ukuhambisa okuthobekileyo. Uthotho lwe-TLSS ...Funda ngokugqithisileyo »
Isicwangciso se-FSFG sesicwangcisi esisetyenziswa ngokubanzi kumatshini wokugaya umgubo wale mihla kunye neerayisi zokugaya ezisetyenziselwa ukusetyenziswa kwengqolowa yokugaya. Uyilo olwahlukileyo lwe-sieving lisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokuhluza kunye ne-midd eyahlukeneyo ...Funda ngokugqithisileyo »
Kwindawo yokusila umgubo, inkqubo yokususa amatye kwingqolowa ibizwa ngokuba yi-de-stone. Amatye amakhulu namancinci aneentlobo ezahlukeneyo zamasuntswana kunalawo engqolowa anokususwa ngeendlela zovavanyo ezilula, ngelixa amanye amatye anobukhulu obulinganayo nengqolowa efuna ukuba ...Funda ngokugqithisileyo »
Icandelo lokutya lishishini leentsika kuqoqosho lwesizwe lwase China, kwaye oomatshini bokutya lishishini elinikezela ngezixhobo kwishishini lokutya. Ngokuphuculwa kweemfuno zabantu kwinkcubeko yokutya kunye nokuchuma kweeresityu, iivenkile zokutyela kunye ...Funda ngokugqithisileyo »